जगदिश्वरनरसिंह के.सी.को ठम्याई– काँग्रेसको संगठन हैन नेतृत्व कमजोर देखियो - Nepal Japan
नेपाली समय : 05:35:03
जापानी समय : 08:50:03
जगदिश्वरनरसिंह के.सी.को ठम्याई– काँग्रेसको संगठन हैन नेतृत्व कमजोर देखियो
22 February, 2019 15:02 |अन्तरवार्ता | comments | 23100 Views
पूर्व सांसद तथा संविधान सभा सदस्य हाल नुवाकोट काँग्रेसका सभापति जगदिश्वरनरसिंह के.सी. प्रष्ट विचार राख्ने नेताका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँसँग नेपाल जापान डटकमका लागि सूर्यप्रसाद कोइरालाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
० यत्रतत्र काँग्रेसको संगठन कमजोर हुँदै गएको सुनिन्छ के साँच्चै काँग्रेसको संगठन कमजोर भएकै हो ?
काँग्रेसको संगठन कमजोर भएको छैन । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व कमजोर देखिएको छ । निर्वाचनको परिणामले पनि काँग्रेस कमजोर छैन भन्ने प्रमाणित भएकै छ । समसामायिक अवस्थामा काँग्रेस नेतृत्व कमजोर, शिथिल देखिएकाले काँग्रेस कमजोर भएको आभाष भएको छ । आम जनताको समर्थन नेपाली काँग्रेसमा अहिले पनि छ । त्यो जनसर्मथनलाई ‘क्याच’ गरेर नेपाली काँग्रेस अगाडि बढ्न सक्यो भने अबको मुलुकको नेतृत्व काँग्रेसले नै गर्ने हो ।
० तपाईं नेपाली काँग्रेस नुवाकोटको जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ, कस्तो छ जिल्लामा काँग्रेसको अवस्था ?
जिल्लामा नेकाको संगठनात्मक गतिविधि सशक्तरुपले सञ्चालन भइरहेकै छ । तर अहिले जुन नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वका कारण काँग्रेस कार्यकर्तामा, शिथिलता, नैराश्यता आउँने गर्दछ । तथापी काँग्रेस हिजोको अवस्थामा जस्तो थियो त्यस्तै छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विपक्षीहरुसँग लड्नसक्ने क्षमता र तागत नुवाकोट काँग्रेससँग छ र, सक्षम पनि छ ।
० भर्खरै पार्टीको महासमिति वैठक सकियो । के भयो जसले काँग्रेसका आम कार्यकर्तालार्य उत्साह जगाउन सकोस् ?
महासमितिको वैठकले नेपाली जनताको आशा भरोसाको केन्द्र थियो । त्यो आशा र भरोसा दिन नसके पनि संघीय ढाँचामा विधान आयो । नेपाली काँग्रेस एक छ भन्ने सन्देश पनि गयो । आम कार्यकर्ताहरुले नेताहरुसँग कुरा राख्ने सौभाग्य पनि प्राप्त भयो । नेताभन्दा पनि काँग्रेसलाई कसरी हिजोको जस्तै बनाउने भनेर भगिरथ प्रयत्नका साथ जनताका आशाा र भरोसा हाँसिल गर्न कोशिस ग¥यौं ।
० तपाईं त जिल्ला सभापति तथा महासमिति सदस्य पनि हो । तपाईंलाई नै त्यहाँ बोल्न दिइएन भन्ने पनि सुनियो नि ? त्यसको कारण के हो ?
मैले म आफू प्रष्ट बक्ता हुँ भन्ने ठान्छु । चाकडी, चाप्लुसी, हुक्के, वैठकको व्यवहार म स्वीकार्न तयार छैन । म पार्टीको इमान्दार सीपाही हुँ । पार्टीलाई जीवन्त राख्न पार्टीको हित, उन्नती समृद्धिको लागि स्पष्ट बोल्दा नेताहरुलाई पाच्य नहुँने हुँदा सभापतिज्यूले बोल्न नदिनु भएको होला ।
० काँग्रेसले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसकेको भन्ने कुरा छ नी ?
काँग्रेस मुलुकको इतिहासमै अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पार्टी हो । इतिहासमा पहिलो पटक खुम्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले के बोल्छ महत्वपूर्ण हुन्थ्यो र बोलेपछि पन्ध्र दिन मुलुक र मुलुकका राजनीतिक दलहरु त्यसै एजेण्डामा तरङ्गीत हुन्थे । तर, आज काँग्रेसको नेतृत्वकै कारण काँग्रेस एजेण्डा विहीन, भूमिका विहीन कमजोर प्रतिपक्ष जस्तो आभाष भएको छ । तर यसलाई नेपाली काँग्रेसले सडक, सदन दुवैतिर जनताका आवाज शसक्त र वुलन्द ढंगले उठाउन नेतृत्वले सामूहिक नेतृत्वमा पार्टीलाई हिँडाउने र सामूहिक सहमतीवाटै पार्टी र पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाहरुलाई सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने नेपाली काँग्रेसले फेरि पनि आफ्नो भूमिका देखाउन सक्षम हुनेछ ।
० कम्यूनिष्ट सरकारको एक वर्षको उपलब्धी चर्चा गर्नु पर्दा कसरी गर्नु हुन्छ ?
कम्यूनिष्ट सरकारको चर्चा गर्नुपर्दा प्रथमतः उपलब्धिहिन, मुलुकले धान्न नसक्ने नारा दिने बाहेक ग्रामीण तहका झुपडीमा बस्ने जनताका लागि उपलब्धिमूलक कुनै कार्य भएको देखिदैन । एक वर्षका बीचमा मुलुक र जनताले प्राप्त गरेका ढाँट, छल र झुटका आश्वसनहरु बाँड्नु बाहेक तत्काल जनताले राहत प्राप्त गर्ने कुरा कम्यूनिष्ट सरकारबाट हुन सकेको देखिँदैन । नारामा पानी जहाज ल्याउनेदेखि रेल मार्ग, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट हावाबाट विजुली, सुनकाण्ड, वाइडवडी काण्ड, यातायात व्यवसायीलाई सिन्डीकेट काण्ड, ‘फोरजी’ काण्ड, महङ्गी, कर वृद्धि, हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायत निर्दोस बालबालिकाहरुको बलात्कारपछि हत्या भयो । तर सिंहदरवार र वालुवाटारमा संरक्षीत गर्ने काम भयो । पीडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन यो सरकार पूर्णतः असफल भयो ।
० भ्रष्टाचारका मुद्दामा काँग्रेसले आफ्नो आवाज मुखरीत गर्न नसकेको गुनासो छ जनताको । के साँच्चै भ्रष्टाचारका मामिलामा काँग्रेसले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न नसकेको मान्नु हुन्छ ?
भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा काँग्रेसले सरकारलाई पूर्णरुपले सहयोग गर्छ । तर षड्यन्त्रपूर्वक कसैको चरित्र हत्या गर्ने नियतले गरिने कारवाही काँग्रेसको लागि स्वीकार्य हुँदैन । भ्रष्टाचारी जो कोही भएपनि अथवा काँग्रेस नै भएपनि प्रमाणका आधारमा कारवाही गरिए हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।